Fantaro i Sam Oyeyele, hampiantrano ny kaonty Twitter @DigiAfricanLang ny 18 ka hatramin’ny 24 Septambra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Septambra 2019 3:39 GMT
Sary nomen'i Sam Oyeyele.
Amin'izao taona 2019 izao izay ao anatin'ny fanentanana media sosialy hankalazana ny fimaroam-piteny an-tserasera, hifandimby ireo Afrikana mpikatroky ny teny sy mpanandrateny hitantana ny kaonty Twitter @DigiAfricanLang hizara ny zava-niainany tamin'ny famelomana aina indray sy fampahafantarana ireo fiteny Afrikana. Ny lahatsoratra etoana dia momba an'i Sam Oyeyele (@samoyeyele) sy izay kasainy horesahana mandritra ny herinandro itantanany ny kaonty.
Lasa toniandahatsoratra Wikipedia aho tamin'ny taona 2011 noho ny fahalianako te-hizara ny fahalalana nananako. Hatramin'ny nandraisako anjara tao amin'ilay hetsika dia ny hamaha ny hantsan'ny votoaty sy ny rafitra mitanila hita amin'ny Aterineto momba an'i Nizeria sy ny kaontinanta afrikanina amin'ny ankapobeny no tanjoko voalohany. Nandritra ny taona maro, nitombo sy nivelatra tamin'ny lafiny maro ny fandraisako anjara tamin'ny hetsika niaraka tamin'ny faniriana handray andraikitra amin'ny fitantanana ny vondrom-piarahamonina ao anaty fahaiza-manao sy ny sehatra samihafa.
Tamin'ny taona 2015 no nanomboka ny Wikimedia ho an'ny Mpikambana Nizeriana aho niaraka tamin'ny mpikambana miisa 3 hafa avy ao amin'ny vondrom-piarahamonina ary izaho no tompon'andraikitra tamin'ny ezaka Fanentanana ho an'ny mpikambana nandritra ny 3 taona mahery. Nikarakara hetsika, atrikasa, fanentanana, fifaninanana sns sns aho tamin'ny sehatra nasionaly, mba hampahafantarana ny Nizeriana hahalala bebe kokoa momba ny Wikipedia/Wikimedia sy handray anjara amin'izany amin'ny fomba samihafa izay azon'izy ireo atao, tamin'ny fampidirana ireo fitenin'izy ireo ao an-toerana.
Vao tsy ela aho no nanomboka tetikasa manerana ny kaontinanta, antsoina hoe ” Tetikasa AfroCine“, izay tafiditra tamin'ny famahana ity olan'ny hantsan'ny votoaty ity amin'ny alàlan'ny sarimihetsika, teathra ary Zavakanto Afrikana. Mikendry ny hahazo votoaty manodidina an'io lohahevitra io izahay mba ho vonona an-tserasera sy ho mora hita amin'ny endrika sy fiteny isankarazany.
Ny Yoruba no fiteniko ao an-toerana. Iray amin'ireo fiteny lehibe 3 any Nizeria izany. Tena tsy ampy ny fanohanana nomerika ho an'io fiteny io raha mitazona sata manan-danja eo amin'ny sehatra nasionaly izany ary ilaina ny fahatsiarovan-tena hanao ezaka avy amin'ny Governemanta Nizeriana sy avy amin'ireo andrim-panjakana manan-danja mba hampiroboroboana ny fotodrafitrasa ilaina amin'ny fiteny, ka ahafahantsika manome antoka fa afaka manoratra mora foana amin'ny fampiasana an'io fiteny io ny olona noho izany, ​​ary avy eo mamaky amin'ilay fiteny. Manana ny anjara toerany ihany koa ireo orinasan'ny teknolojia (izany hoe mpanamboatra solosaina sy finday) amin'ny fanomezana antoka fa afaka mifampiresaka sy mahazo fampahalalam-baovao amin'ity fiteny ity ny olona.
Mikasa ny hiresaka momba ny maha-zava-dehibe ny finiavana hifantoka amin'ny fiarovana ireo fitenin'ny Nizeriana amin'ny ankapobeny ao an-toerana aho. Avy eo aho hiresaka momba ireo fanamby atrehan'ny fiteny Yoruba, na eo amin'ny rafi-pampianarana Nizeriana ankehitriny na eo amin'ny sehatra nomerika eran-tany. Hiezaka hanome ny vahaolana izay azo tanterahana ihany koa aho kanefa ankasitrahako indrindra ny vahaolana avy amin'ny besinimaro ary avy eo haneho hevitra sy hizara. Hiezaka hanao izay tratrako aho mba hahatonga ny fitantanana ny kaonty mba hifanakalozan-kevitra . Tsy ny hevitro manokana ihany no tiako ampitaina fa ny hanomboka adihevitra sy hitady vahaolana iraisana amin'ireo olana ireo.
Faniriako hahita ny tontolo ahafahan'ny olona mianatra sy mizara ny fahalalana amin'ny teny Yoruba no tena antony nanosika ahy hanao izany araka ny efa voalazako. Tiako ny hahita ny fanafoanana eto amin'izao tontolo izao ny tsy fitoviana izay mikiky ny fiteny ankehitriny. Ny mba hahafahan'ny fiteny Yoruba ho tafiditra lalina sy ny mba hahazoany fanohanana nomerika izay isitrahan'ny fiteny tandrefana amin'izao fotoana no fanantenako sy nofinofiko ho an'ity fiteny ity.